Madaxweyne Siilaanyo oo magacaabay Guddiga Qaban-qaabada Xuska munaasibadda Maalinta Madax-bannaanida Somaliland - Somaliland Post
Home News Madaxweyne Siilaanyo oo magacaabay Guddiga Qaban-qaabada Xuska munaasibadda Maalinta Madax-bannaanida Somaliland
Madaxweyne Siilaanyo oo magacaabay Guddiga Qaban-qaabada Xuska munaasibadda Maalinta Madax-bannaanida Somaliland
Hargeysa (SLpost)- Madaxweynaha Somaliland Md Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa wareegto uu maanta soo saaray ku magacaabay Guddiga Qaban-qaabada Xuska munaasibadda 18-ka May oo ah maalintii ay Somaliland Xornimadii dib ugala noqotay Midowgii Soomaaliya.
Guddiga Madaxweyne Siilaanyo magacaabay, ayaa ka kooban Wasiirro, Maayarka Caasimadda iyo xubno kale, waxaana guddoomiye u ah Wasiirka Arrimaha Gudaha Cali Maxamed Waran-cadde.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada Axmed Saleebaan Dhuxul oo lagu shaaciyey digreetada madaxweynaha, ayaa u qornaa sidan: “Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo, waxa uu Digreeto Madaxweyne oo sumadeedu tahay, JSL/M/MG/241-2387/042014 ku magacaabay Guddida Qaban-qaabadda Xuska 18 May, oo uu gudoomiye u yahay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha JSL, Mudane Cali Maxamed Warancade.
Sida aad la socotaan waxa foodda inagu soo haya haddii Eebe idmo Xuska sanad guuradda 23aad ee maalinta Qaranimada Somaliland ee 18 May, maalintaas oo mudan xus iyo xusuus gaar ah.
Haddaba, waxaan Guddida Qaban-qaabadda ka rajaynayaa inay xil qaranimo iska saari doonnaan xuska maalinta 18 May oo mudan qadarin gaar ah. Sidoo kale, Maamullada Gobollada iyo Degmooyinka waxa aan farayaa inay Guddida gacan buuxda ku siiyaan gudashada hawshan.”